IiROM ze-Android, zenzele kwaye ufumane okuninzi kwiselfowuni | I-Androidsis
Ngamanye amaxesha kukho imigaqo enzima, enje nge i-ROM okanye yintoni enye efana negama lesiNgesi imemori yokufunda-kuphela, okanye imemori yokufunda kuphela. Zibizwa njalo i-ROM kuguqulelo olwenziwe kwinkqubo yokusebenza ye-Android ngokwayo ngabasebenzisi abanolwazi lwenkqubo abanenjongo yokuphucula okanye ukwenza ngokwezifiso le nkqubo yokusebenza. Inkqubo ye- i-ROM Eyona idumileyo ukusukela ekuqaleni kwe-Android zonke iintlobo ze ICyanogenMOD, Eyenze ubuninzi beeROM ngobuninzi bezixhobo ezahlukeneyo ze-Android.
Ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso i-Android yakho ngokupheleleyo, fumana ezona ROM zibalaseleyo ze-Android onokuzibeka kwiselfowuni okanye ithebhulethi ukuze ufumane okuninzi kuyo okanye wenze ngokwezifiso yonke imiba yenkqubo kaGoogle.
IiROM ezilungileyo ze-Android
Apha ngezantsi uyakufumana ukhetho lwee-ROM ezilungileyo ezikhoyo ngoku kwisixhobo sakho.
Ikamva "lokudanyaza" okanye ukufaka iROM liya kuyenza ngokusebenzisa isikhangeli sewebhu
por UManuel Ramirez yenzayo Iinyanga ze4 .
Ngawaphi amaxesha apho ukufakwa kweROM kwakubalulekile ukuze ube nefowuni ezinzileyo ngaphandle kweengxaki ...
Ukungena kwakhona kwi-Android 11 nge-Samsung Galaxy
por UManuel Ramirez yenzayo Iinyanga ze6 .
Ifakelwe i-UI 3.0 enye kwi-Galaxy Note10 +, ngoku kukho into entsha malunga nokufaka ukubuyiswa kwakhona kwi-Android ...
I-LineageOS 17.1 izisa i-Android 10 kwi-Nexus 7 kunye neMoto Z3 Play
por UDaniPlay yenzayo Iinyanga ze6 .
Enye yeROM ezidume kakhulu kubukho beLageageOS, enkosi kuyo kunokwenzeka ukunika ubomi kwiifowuni kunye neetafile ...
IVivo iya kwazisa iFuntouch OS 9.1 ngoSeptemba 17
IVivo izakusishiya neefowuni ezininzi ezinomdla kwezi veki, njenge-NEX 3 kunye ne-NEX 3 ...
UXiaomi uyeka ukukhupha i-MIUI 10 betas kule nyanga
UXiaomi ulungiselela ukumilisela i-MIUI 11 kungekudala, kulindeleke ukuba ifike ngo-Septemba ngokolwazi olutsha….
I-MIUI 11 yayiza kufika ngoSeptemba ineendaba ezahlukeneyo
Ekuqaleni konyaka, uXiaomi uqobo uqinisekisile ukuba sele besebenza kwi-MIUI 11. Yinto entsha le ...
I-EMUI 10 ngoku isemthethweni: Yazi zonke iindaba zayo
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba uHuawei wayeququzelela inkomfa yonjiniyela ekuqaleni kuka-Agasti. Kwangokunjalo,…
I-MIUI iya kuba neentengiso ezimbalwa njengoko uXiaomi esitsho
Njengoko besisele sazi, i-MIUI ineentengiso kwi-interface yayo, nangona iyinto ebangele iingxaki ezinjengeenyanga ezimbalwa ezidlulileyo….
Olu lolunye lotshintsho esiza kubona kwi-EMUI 10
Kwisithuba seveki i-EMUI 10 iya kuziswa ngokusemthethweni, njengoko kuqinisekisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Oku…
Ndiqinisekisile izinto ezintsha ze-EMUI 10
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo umhla wokubonakaliswa kwe-EMUI 10 watyhilwa, inguqulelo entsha ye ...
I-EMUI 10 sele inomhla wokufayilisha
Ezi veki i-EMUI inguqulelo ye-9.1 sele isungulwe, efikelela kwiifowuni ezininzi zeHuawei. Nangona…
Uhlaziya njani iRom ngaphandle kokulahleka kwedatha okanye usetyenziso olufakelweyo
Eyona Rom yomzuzu we-Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S3 kuhlobo lwe-Android 7.1 GT-I9300
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S3 kwi-Android 6.0 Marshmallow
(Iposwe yahlaziywa) Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S2 kwi-Android 5.1.1 Lollipop
Inomdla !! Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Tab 7 kwi-Android 5.1.1 Lollipop (imodeli yeP1000)
Uyihlaziya njani i-Samsung galaxy S3 kwi-Android 5.1.1
Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Tab 7, imodeli P1000 kwi-Android 4.4.4
Tsiba iSamsung! kwaye ubuyekeze i-Mini S3 mini kwi-Android 4.4.3
Isisombululo kwimpazamo evela ekubuyiseleni xa uzama ukukhanyisa i-Android 4.4 Kit Kat Rom
Khuphela i-Android 4.3 esemthethweni ye-Samsung Galaxy S3 (ngaphandle kweKNOX)
Ungazilungisa njani iingxaki zesithuba kwi-LG L3 E400
Flash i stock ROM kwi Xperia yakho kunye Flashtool
Lungisa ukuphinda umkhondo weengoma kwiRoms Jelly Bean okanye kwi-ICS